I-Atletico idlala ne-Chelsea – ngenkathi i-Barca ibala imali | Scrolla Izindaba
I-Atletico idlala ne-Chelsea – ngenkathi i-Barca ibala imali
Lapho i-Atletico Madrid idlala ne-Chelsea ku-Champions League yokugcina yomlenze we-first 16, i-Barcelona izobe ibheke ngentshisekelo.
U-Luis Suarez ushiye i-Barca wajoyina i-Atletico ekupheleni kwesizini edlule kepha isivumelwano besifaka nesigatshana esisho ukuthi i-Barca izothola imali eyongeziwe uma i-Madrid izodlulela kuma-quarter-final e-Champions League kumasizini amabili ezayo.
Ngokubika kwe-Spanish Daily Sport, i-Atletico vele isikhokhe imali eyizigidi eziyi-R120 ngomgadli uSuarez – nemali engaphezudlwana kweyizigidi ezingama-R80 yokuthola imali yokuqala kanye nemali elinganiselwa kweyizigidi ezingama-R34 ngemuva kokuthi i-Uruguay ibadlalele imidlalo engama-20.
Ukuqubuka okulandelayo okungenzeka kube yisigatshana se-Champions League. I-Barca izobe inethemba lokuthi i-Atletico ishaye i-Chelsea emilenzeni yomibili futhi ingene kwi-quarter final ye-Champions League. Lokho kungenza ukuthi isheke lezigodi ezingama-R68 liye ku-Barcelona.
Njengoba uSuarez esefomini enhle, i-Chelsea kufanele ixwaye abase-South American . Kuze kube manje nguyena ohamba phambili ngokushaya amagoli e-La Liga ngemidlalo eyi-16, owodwa ngaphambi komngani wakhe uLionel Messi.
I-Atletico, engabaholi be-La Liga, iya kulo mdlalo ihlukunyezwe ngendlela eshaqisayo ngokunqotshwa ngamagoli amabili eqandeni yi-Levant ekhaya ngeSonto. I-Chelsea, esendaweni yesihlanu kwi-English Premier League, idlale ngokulingana ne-Southampton ngoMgqibelo.
Khonamanjalo e-Italy, uLazio uzodlala neqembu elingompetha elivikela lo mqhudelwano i-Bayern Munich. Lo mlenze wokuqala uzobanjelwa e-Stadio Olimpico ngo-10 ebusuku ngoMgqibelo.